Kamshaawwan muraasni halqara irratti hirkachuun ofumaa banamu. Fakkeenyaaf, yommuu keessa gabatee galmee barruu keessaa cuqaastu, kamshaan gabatee ni banama. Yommuu keessa keewwata lakkoofsamee cuqaastu kamshaan Rasaasaalee fi Lakkaawwii ni banama.
Kamshaa Yeroodhaaf Cufuu
Kamshaa Turaalessaan Cufuu
Kabala mataduree kamshaa gara qarqara foddaa galmeetti harkisi.
Foddaa bololi'aa deebistee qabsiisuuf, kabala mataduree foddichaa gara qarqara foddaa galmeetti harkisiiti kaa'i. Yommuu qabduu hantuutee gadlakkiftu akeektuun hantuutee qarqara foddaa galmeetti baay'isee dhiyaachuu qaba.
Title is: Kamshaawwan Fayyadamuu